भारतीय जनतालाई अर्को हप्तादेखि कोरोनाको खोप, नेपाल भने कहिलेसम्म खोप पाइन्छ भन्ने अन्यौलमै ! « Bizkhabar Online
भारतीय जनतालाई अर्को हप्तादेखि कोरोनाको खोप, नेपाल भने कहिलेसम्म खोप पाइन्छ भन्ने अन्यौलमै !
10 January, 2021 11:02 am
काठमाडौं । कोरोना संक्रमण (कोभिड–१९) बाट विश्वमै सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्र सूचीमा अग्रस्थानमा रहेको भारतले आगामी माघ ३ गतेदेखि कोरोनाको खोप अभियान शुरु गर्ने भएको छ । कोरोनाको खोप लगाउने अभियान शुरु गर्न बसेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहितको शनिबारको बैठकपछि सो निर्णय लिइएको हो ।
भारतले यस अघि भारतमै बनाइएका दुई भ्याक्सिन कोभ्याक्सिन र कोभीशिल्डलाई प्रयोगको अनुमति दिइसकेको छ । खोप अभियानको पहिलो चरणमा लगभग ३ करोडलाई दिइने बताइएको छ ।
जसमा स्वास्थ्य कार्यकर्ता, अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीहरुलाई प्राथमिकता दिइने भएको छ । यस पछि ५० बर्षभन्दा बढी उमेरका र गम्भीररुपले विरामी रहेकालाई खोप दिइने बताइएको छ । उनीहरुको संख्या करिब २७ करोड भएको बताइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले माघ ३ गते (जनवरी १६) को दिन कोरोनाविरुद्धको लडाईमा महत्वपूर्ण दिन हुने बताएका छन् । मोदीले यस अभियानमा बहादुर डाक्टर, हेल्थकेयर वर्कर्स, सफाई कर्मचारसहित फ्रन्टलाइन कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।
नेपालमा कहिलेसम्म कोरोनाको खोप उपलब्ध हुन्छ भन्ने निश्चित देखिदैन् । सरकार अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले कोभ्याक्समार्फत उपलब्ध गराउने भनिएको खोपको पर्खाइमा छ । कोभिड–१९ खोपमा सबै मुलुकको समतामूलक पहुँचका लागि विश्वव्यापी पहल कोभ्याक्सअन्तर्गत नेपालले सहुलियतमा पाउने भनेको खोप केवल २० प्रतिशत व्यक्तिलाई पुग्नेछ ।
सहुलियतको यो खोप पनि पहिलो चरणमा ३ प्रतिशत अर्थात् ९ लाख मानिसलाई पुग्ने गरी आगामी मार्चसम्म र बाँकी १७ प्रतिशत त्यसपछि सन् २०२१ भित्र आउने अनुमान छ । यो अनुमानअनुसार मुलुकमा पहिलो खोप आउन आगामी चैत–वैशाखसम्म कुर्नुपर्ने छ ।
नेपालमादुई तिहाइभन्दा बढी नागरिकलाई खोप आवश्यक पर्न सक्ने आँकलन छ । सहुलियतको खोप भने करिब ६० लाखका लागि मात्रै पुग्ने र, यो खोप कोभ्याक्सले स्वास्थ्यकर्मी र उच्च जोखिममा रहेका मानिसलाई प्राथमिकतामा राखेर उपलब्ध गराउने भनेको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप ल्याउनदेखि लगाउनेसम्मको तयारी गर्नका लागि विभिन्न ८ उपसमिति समेत बनाएको छ । मन्त्रालयले विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ), ‘गाभी र सेपी’ नामक तीन सङ्गठनको ‘कोभ्याक्स सुविधा’ नामक संयन्त्रअन्तर्गत सहुलियत दरमा २० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई पुग्ने खोप ल्याउन थालेको बालबालिका तथा खोप सेवा शाखाका प्रमुख डा झलक शर्मा गौतमले बताए । उनले अझै खोप परीक्षणकै क्रममा रहेकाले कुन खोप ल्याउने भन्ने निश्चित भइनसकेको बताए। शुरूमा २० प्रतिशत जनतालाई खोप ल्याएपछि विस्तारै सबैलाई पुग्नेगरी खोप ल्याइने उनले बताए ।
कोभ्याक्सअन्तर्गत आउने खोप नेपाललाई निःशुल्क प्रदान हुनेछ । गरीब तथा कम आय भएका मुलुकलाई कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत खोप निःशुल्क प्रदान गरिनेछ ।
डा शर्मा गौतमका अनुसार फाइजर एण्ड वायोएनटेक कम्पनी (रसिया), मोडेर्ना (अमेरिका०, ग्यामेलिया (रसिया) र अक्सफोर्ड एक्ट्राजेनिका (बेलायत) कम्पनीका खोप अहिले परीक्षणका क्रममा रहेकाले तिनीहरूमध्ये एउटा कम्पनीको खोप स्वदेशमा ल्याइनेछ । खोप उत्पादन गर्ने मुलुकमा दर्ता भइसकेपछि डब्लुएचओमा दर्ता र त्यसपछि नेपालको औषधि व्यवस्था विभागमा खोप दर्ता हुनेछ ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले सरकारले खोप ल्याउने तयारीका साथ काम गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार खोपका लागि आवश्यक रकम, खोप ल्याइसकेपछि भण्डारण, खोप शुरूमा कसकसलाई दिने, खोप कसरी दिने भन्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम जस्ता काम भइरहेको छन् ।
भारतले यसअघि भारतमै बनाइएका दुई भ्याक्सिन कोभ्याक्सिन र कोभिशिल्डलाई प्रयोगको अनुमति दिएसँगै सरकार भारतले नेपाललाई खोप छिटो देला कि भन्ने आशामा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरु सरकारले विभिन्न देशहरुसँग खोप ल्याउन छलफल र पहल गरिरहेको भएपनि नेपालमा खोप यो समयसम्म आइपुग्छ र जनताले यो मितिदेखि खोप पाउँछन् भन्ने विषय अन्यौलमै रहेको छ ।